I-Erin Villa Coonoor (2 BHK ikotishi elizimele) - I-Airbnb
I-Erin Villa Coonoor (2 BHK ikotishi elizimele)
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Mohammed Jaffer
2-Bedroom Guest Cottage eyingxenye ye-150+ ye-Colonial Bungalow ubudala. Itholakala emgwaqeni ozimele, itholakala ku-6-acres womhlaba oyindlela yokuphatha abathandi bemvelo. Izilwane eziningi zasendle, izinyoni nezitshalo; ukubukwa okukhulu; ukusondela kokubona izindawo kanye nezinye izindawo ezithakazelisayo; ubumfihlo, ukuthula nokuthula ngezinye zezizathu zokuthi kungani ingekho enye indawo yokungcebeleka, ihhotela noma indawo yasekhaya engamesha ozothola lapha. Kukhona okunye okumangazayo futhi, hlola izithombe ukuze ubone ukuthi yini ongayithola e-Erin Villa.
Ufika kusihlwa lapho imisebe yokugcina yelanga isiphumile emkhathizwe. Ukuzola sekuqalile futhi nomoya obandayo, opholile usuqala ukugcwala ngokuchofoza okukude nokutshiyoza kwama-cicadas namakhilikithi. Ungena ekamelweni lakho elithokomele ekotishi futhi uthathe isipho sokugona okufudumele ingubo yakho ekuthembisa yona. Ukuthula, okukuvumela ukuthi uzwe umsindo wenhliziyo yakho ishaya kancane, kukuphumuze futhi ngokushesha, ungene ebuthongweni obunokuthula kakhulu.
Usuku olusha seluqalile futhi uvuka uzwa umsindo omnandi wezinyoni ezicula. Ukukhanya kwasekuseni kungaphandle akucele ukuthi uvule amafasitela angene angene, ungene engadini uhlangabezwe wukuxokozela kwemibala. Umoya ohlanzekile ukulethela amasampula ephunga elimnandi elivela ezimbalini ezizungezile. Amaqabunga notshani kuyabenyezela njengoba ukukhanya kwelanga kuveza amaconsi amazolo acwebile.
Isikhathi siyahamba kancane ukuze sikuvumele ukungenise konke futhi ujabulele wonke umsindo, ukubona, ukuhogela kanye nomuzwa onikezwa indawo.
Ungachitha amahora ubuka izinyoni noma ubone ukuthi izingwejejeje ezinkulu ezihlala khona iMalabar noma mhlawumbe uvemvane olumibalabala ongakaze ulubone ngaphambili luzokudonsa ukunaka kwakho, kungase kube isinambuzane esithakazelisayo ongathanda ukusibona, ungase uhambe phansi. emfudlaneni ukuze ucwilise izinyawo zakho emanzini abandayo (qaphela ama-leeches!) noma uhlale phansi nencwadi ethakazelisayo nenkomishi yetiye elishisayo njengoba inkungu iqala ukumboza indawo ezungezile.
Lezi ngezinye zezindlela eziningi ezingenzeka zokubuyela ekuvumelaneni nemvelo futhi uphumule. Le yindawo ka Erin Villa.
I-Erin Villa iyisakhiwo samagugu esineminyaka engu-150+ ubudala esasikade singesombhangqwana base-Ireland. Ihlanganisa indlu enkulu kanye nendlu yezivakashi. Itholakala ku-6-acres womhlaba otholakala ku-1.8 kms ukusuka edolobheni elikhulu laseCoonoor emgwaqeni ozimele oholela eSingara Estate.
Indlu yezivakashi inamakamelo okulala angu-2 anamagumbi okugezela anamathiselwe, igumbi lokuhlala, igumbi lokudlela, ikhishi, igumbi lokuphumula nendlu yangasese eyengeziwe futhi likwazi ukuhlalisa abantu abangu-4+2 ngokukhululeka.
Iyindawo yabathandi bemvelo futhi inezinhlobonhlobo zezitshalo nezilwane. Abathandi bezilwane zasendle ngezikhathi ezithile bangabona izinyamazane, izinyathi, izingwejeje ezinkulu ze-Malabar, izingungumbane, onogwaja basendle, ama-mongoose namabhere. Ungabona okungenani izinhlobo ezihlukene zezinyoni ezingu-40+ kanye nezinhlobo eziningi ezahlukene zezimbali nezitshalo uma kungenjalo, ngaphakathi naseduze kwendawo.
Kukhona nomfudlana ofinyeleleka kalula kanye nempophoma (ukufinyelela kuwo kudinga uhambo olufushane futhi sincoma ukuthi uphathe amabhuzu enjoloba noma izicathulo ezinhle ukuze uphephe uma ufuna ukufika kuwo). Konke lokhu kungatholakala ngaphakathi kwendawo eyi-6-acre ezungezwe amagquma ambozwe itiye ezinhlangothini ezimbili, ihlathi ngakolunye uhlangothi kanye nombono wamathafa angezansi.
Ngamafuphi, lena indawo ongaza kuyo uma ufuna ukujabulela imvelo engaxutshiwe ekude nethrafikhi, ukungcola, amagajethi, nobuchwepheshe. Izindawo zokudlela ezinhle, izindawo zabavakashi njengepaki ye-Sims, iLambs rock, ikhala le-Dolphins, njll kungaphakathi kohambo lwemizuzu eyi-10-15. Ezinye izindawo ezithakazelisayo njenge-Ooty, Kotagiri, Catherine falls njll, zingaphakathi kwemizuzu engu-45 yokushayela.
Ukudla kwasekuseni kuyancomeka futhi unezinketho ezimbili-
1. Ikhishi elisendlini encane lizobe ligcwele ijusi, ubisi, ama-cornflakes, amaqanda, isinkwa, ujamu, ibhotela, izikhwama zetiye nekhofi. Izitsha ezidingekayo, i-cutlery, i-toaster, isitofu kanye negedlela likagesi kuhlinzekwa futhi ungenza isidlo sakho sasekuseni.
2. Ungabhekisa amabombo edolobheni lase-Coonoor futhi ube nesidlo sasekuseni saseningizimu ye-Indian endaweni yokudlela ekhethiwe (ifakwe emalini)
Ngokudla kwasemini nedina, kunezindawo eziningi zokudlela ezinhle e-Coonoor nasezindaweni ezizungezile futhi ezimbalwa zazo zize zilethe ukudla ekhaya ukuze ungaphumi uma ufuna ukujabulela ukudla okushisayo endaweni enethezekile.
Indawo yethu isemgwaqweni ozimele ngakho-ke inani elihle lobumfihlo lingajatshulelwa. Umgwaqo unezinye izindawo ezi-3-4 kuphela eziqhelelene kahle futhi uphelela embonini yetiye yaseSingara. Ukubuka okufanayo umuntu angakubona edwaleni leWundlu noma ekhaleni le-Dolphins kungabonakala endaweni yethu futhi umbono ocacile we-panoramic ungabonakala uma uthatha imizuzu eyi-10 uhamba ngomgwaqo.
Indawo yokudlela eseduze eseduze iqhele ngamamitha angu-600 kanti ezinye izitolo nezitolo zokuhlinzeka zingatholakala phakathi kwama-2 kms noma imizuzu emi-5-10 ukuya edolobheni. Uma ungathandi ukuphuma kusho ukuthi kukhona nezindawo zokudlela eziseduze ezilethela ukudla ekhaya.
Ibungazwe ngu-Mohammed Jaffer
Ngitholakalela imibuzo ngefoni noma ngombhalo. Uma kwenzeka uthola ukuthi inombolo yami ayitholakali (inethiwekhi ingaba yimbi kwesinye isikhathi), ungazama ukungithola kuWhatsApp.
Zizwe ukhululekile ukungibuza nganoma yini ngaphakathi naseduze kwendawo. Ngingumuntu othanda imvelo futhi ngingathanda ukukubonisa zonke izinto ezimangalisayo lapha. Uma ungathanda ukubona ezinye zezinyoni noma izilwane ezithombeni, ngingajabula ukuhlala ngiziqaphile futhi ngikubonise.
Ufuna iziphakamiso zezindawo zokudlela noma izindawo zokuthenga umkhiqizo wendawo njengoshokoledi, ushizi, amafutha abalulekile njll? Nami ngingakusiza ngalokho.
Ngitholakalela imibuzo ngefoni noma ngombhalo. Uma kwenzeka uthola ukuthi inombolo yami ayitholakali (inethiwekhi ingaba yimbi kwesinye isikhathi), ungazama ukungithola kuWhatsApp…